Maoritania: Manomboka Ny Diaben’ny Fanantenana Farany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Marsa 2012 14:20 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, বাংলা, Italiano, Ελληνικά, عربي, русский, English
Nanomboka ny dia an-tongotra 470 km ny mpikatroka Maoritaniana, niainga avy any an-tanànan'i Nouadhibou ho any an-drenivohitra Nouakchott, hitondra fitakiana ara-toekarena sy ara-politika maromaro amin'ny manampahefana. Antsoina hoe Diaben'ny Fanantenana Farany ary kendrena avy amin'izany ny ijerena ny fanirian'ny Maoritaniana sy ny isian'ny fanavaozana ara-drafitra.
Manoratra momba ny diabe ny mpamahana bolongana Ahmed Jedou ka milaza fa [Ar] maro ny mpikatroka, ary anatin'izany ny bilaogera, sendikalista, mpampianatra ary ireo voaroaka tamin'ny asany mandray anjara ao anatiny. Antenaina, araka ny nosoratany, fa higadona any Nouakchott amin'ny tapaky ny volana marsa, raha tsy mialoha izany, ny Diabe.
Ao anatin'ny fitakian'ny mpanao diabe ny :
Mpikatroka eo am-panombohan'ny diabe mahatratra 470km . Saripika: Ahmed Jedou
1. Fiantohana kely indrindra ny fahafaha-miteny am-pilaminana ho an'ny mpikatroka ao an-tanàna
2. Hiresaka matotra sy mivantana amin'ny manampahefana ambony hampitsahatra ny fampijaliana ny olona eny amin'ny tanàna manodidina izay lazain'ny fitondrana fa hafindra amin'ny toerana tsaratsara kokoa. Ny dinika dia tokony ho tonga any amin'ny fametrahana trano misy ny kojakoja ilaina sy mendrika ny tanàna natao ho renivohitra ara-toekarena sy fitaratry ny fampandrosoana.
3. Mitaky ny fampidirana miasa ireo zatovo efa voaofana amin'ny sehatra nanomanana azy mba hanentsina ny toerana banga mihamaro eny amin'ny sehatra isan-karazany any, toy ny fanjonoana, ny fitrandrahana, noho ny fahamaroan'ny mpiasa handeha hisotro ronono
4. Mangataka ny hampakarana ny karaman'ny mpiasam-panjakana sy tsy miankina hanamaivanana ny vesatry ny fandaniam-bolan'ny mpiasa
Ao anatin'ny fitakiana hafa indray ny fanadiovana ny arabe izay feno fako sy ny fanomezana tany ho an'ny tanora tsy an'asa manana diplaoma oniversite mba ahafahan'izy ireny manomboka ny fandraharahany manokana.
Tahaka ireo namany any amin'ny tontolo arabo dia efa ho herintaona izao no nitoloman'ny mpikatroka Maoritaniana ny isian'ny fanavaozana ara-toekarena sy ara-politika.